အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: တံတားကိုဖြတ်သွားတဲ့ မြီးရှည်..
21 Responses to “တံတားကိုဖြတ်သွားတဲ့ မြီးရှည်..”
သူက ရာဇ၀င်နဲ့ကိုး တကယ်ပဲ ပထမတော့ တံတားကိုဖြတ်ပြီး သွားစားတဲ့ မြီးရှည်ထင်နေတား)
ပြင်ဆင်ထားတာလေးက သပ်ရပ်ပြီး စားချင်စရာလေး
မစားကောင်းရင်တောင် အဲ့လို သပ်ရပ်နေတာလေးဆို
အမချော လုပ်တဲ့ မြီးရှည်ကျတော့ ဘယ်လို နာမည်ပေးမလဲ မသိဘူး။ ခရီးသွားမြီးရှည်ဆိုရင် ပိုကောင်းမလားဘဲ။း))
အသားစိမ်းတွေကို မပြုတ်ပဲ ပူတဲ့ဟင်းရည်ထဲ ထည့်လိုက်တာနဲ့ ကျက်သွားလားဟင် မချော .. ညီမက အစိမ်းလိုဖြစ်နေရင် မစားရဲလို့ ..:D
မြီးရှည်က ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာ...
မချောရာ... အိမ်ကို သတိရအောင် လုပ်တယ်... :(
Mi Xian, I love that too. I still remember the delicious mi xian from Gui Lin. Thanks Chaw for sharing!
ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ ထိုင်ပြီးသွားရေကျခဲ့ရပါတယ်။ တံတားကိုတော့ မဖြတ်ခဲ့ရပါဘူး။ မြီးရှည်ကြိုက်တယ်. မချောလက်ရာကိုပဲ စားတော့မယ်။
ငုံးကြော်လေးကိုစိတ်ဝင်စာထှာ........။ သူ့မြီးရှည်က အစာပလာတော့သိပ်မစုံဘူးနော်...စားကောင်းမယ့်ပုံပါပဲ...။
မြီးရှည် စားချင်တယ် စားချင်တယ် ချောလုပ်တဲ့ မြီးရှည်က ပိုကောင်းမယ်
ကိုအောင်ကိုကို (မြစ်ကြီးနား) said...
မချောရေ..... ခင်ဗျားရဲ့ပို့ စ်ထဲ က ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ တော့ ဒီမြီးရှေ ဆိုင် က Kunming က Luo Si Wan Trading Centre ပေါ်က မြီးရှေ ဆိုင်များလားလို့ သတိတွေရပြီးမြီးရှေ စားချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဗျာ။ ခုံတွေ၊ပြင်ဆင်ပုံတွေက တော်တော်တူတယ်ဗျ။ ဟုတ်မဟုတ်ပြောပြဦးနော။ အချိန်ရရင် ကချင်ပြည်နယ်က ပိန်းပေါင်းအကြောင်းလေးရေး ပါဦး။
စားချင်တယ် စားချင်တယ် စားချင်တယ် ညနေ ညဈေးသွားမယ် မချော ဟာလောက်တော့ ကောင်းမယ်မထင် မြီးရှည် ပြောတာ
ထုံးစံအတိုင်း တွေ့တာရှိတာတွေထည့်ပြီးတော့ လုပ်ကြည့်မယ်။ :D
မြေအိုး မြီးရှည်တော့ စားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ငုံးကြော်တော့ ကြိုက်တယ်...
မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ ဘ၀ ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပြီး
ချောရေ တစ်ခါတုန်းကလိုပဲ အိုးလိုက်ပဲ စားမယ်နော်။ ကုန်တယ်။ ကုန်တယ်။ အဲဒီလောက်လေးကတော့။ အမလေး။
မြီးရှည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကွယ့်။ အော်...ဒါနဲ့ ငုံးကြော်တစ်ပွဲသီးသန့်ပါဆယ်လုပ်ပေးပါဦး။
ရွှလွတ် သွားရည်ကျသွားတယ်။ မသိသေးတာတွေလည်း သိသွားလို့ ကျေးကျေး မချောရေ။ ခေါင်းစဉ်မြင်ပြီး အတွေးပေါက်သွားတာက တစ်မျိုး။ ဟီး
ဒီလိုလေး လုပ်စားရင်လည်း စားကောင်းမှာဘဲ။
မြီးရှည်လာစားတာ နောက်ကျလို့ အိုးဖင်ကပ်ပဲ ကျန်တော့ပါလား ... အပေါ်ကလူတွေ စားတာ ကုန်ပြီ။ ထပ်ချက်ပေးပါ ဒေါ်ဒေါ်ချောရေ ....... :))
တံတားပဲ ဖြတ်ဖြတ်၊ ဘာပဲဖြတ်ဖြတ်၊ အဲသည်လို မြီးရှည်မျိုးတော့ ၂ပွဲလောက် ဆင့်ပြီး စားလိုက်ချင်သေး..။ အဲ..မိုးခါးပြောသလို အသားတွေ မကျက်မှာတော့ စိုးမိတယ်..။
နောက်.. ငုံးကြော်လည်း မစားရဲဘူး..။